Qabuuro wadareed lagu aasay illaa 12 ruux oo laga helay degmada Mandera – STAR FM SOMALIA
Qabuuro wadareed lagu aasay illaa 12 ruux oo laga helay degmada Mandera
Wararka ka imaanaya degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in qabuuro wadareed ay ku aasnaayeen ilaa 12 ruux la helay.
Meydadkan ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dad ku dhow lixdan ruux oo lagu la’aa bilihii la soo dhaafay magaalada Mandera, kuwaasoo la rumeysan yahay inay wateen Ciidamada ammaanka.
12-ka meyd ee laga helay xabaala wadareedka ayaa waxaa laga aqoonsaday haweeney magaceeda lagu soo gaabiyay Isniino oo dukaan shaah lagu iibiyo ku laheyd Mandera.
Sida uu qoray wargeyska The Star haweeneydan oo meydkeeda qaawanaa ayaa laga soo faagay god lagu aasay, waxaana la sheegay in jirdil badan ka muuqday ka hor inta aan la toogan.
Haweeneydan ayaa todobaad ka hor laga kaxeeyay dukaankeeda, waxaana la sheegay in Ciidamada la dagaalanka Argagixisada ay ka wateen goobteeda ganacsi oo ka soo horjeeda Masaajidka Al-Furqaan ee Mandera.
Wararka ayaa intaa ku daraya in iidamada kaxeystay haweeneydaas ayaa watay gaari aan laheyn wax sumad ah ama Taariko, sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal.
Taliyihii ciidamada Booliska Galguduud oo lagu dilay Cabudwaaq